Asa matotra: manamaivana ny enta-mavesatra
"Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana, noho ny amin'i Kristy; fa ny fahalemeko no fahatanjahako" — 2 Kôr.12:10.
Maro tsy tambo isaina ireo mifantoka amin'ny fizahan-toetra sy ny olana manjo azy. Kanefa, rehefa manadino ny tenany izy ka mijery ny zava-manahirana sy ny fahorian'ny hafa, dia tsy hanam-potoana hieritreretana ny fahoriany manokana akory. Ny asa atao amim-pahamatorana ho an'ny Tompo dia fomba hiatrehana ny sorisorin-tsaina; ary ny tanana mahavonjy hanaisotra ireo enta-mavesatra nentin'i Kristy ho an'ireo lovany rehetra dia hanamaivana ny enta-mavesatsika, ary toa hadino aza izany. Ny asa tsara sy marina dia hisy fiantraikany tsara eo amin'ny saina amin'ny alalan'ny fitondrany zava-tsoa mahasalama eo amin'ny vatana. Ny fikolokoloana tsy tapaka ao an-tsaina ny aretina sy ny enta-mavesatra no mahafaty. Tokony hionona amin'ny fiantsorohana ireo adidy andavanandro isika; ary mikasika ny tsindry mavesatra noho ny andraikitry ny ampitso, aoka hatrehina amin'ny fotoana tokony hiantsorohana azy izany.
Antsoina isika ankehitriny mba hahazo fahalalana hanatanterahana ny asa izay nankinin'Andriamanitra ammtsika, fa tsy hanimba ny fiainantsika izany. Ny olon-tsotra indrindra dia afaka ny hanana anjara amin'izany asa izany sy hahazo valisoa rehefa tonga ny fanomezana satroboninahitra, ary i Kristy, Solovava sy Mpanavotra antsika, dia tonga Mpanjakan'ny olom-boavonjy. Tsy maintsy manao izay azon'ny tanantsika atao amin'ny herintsika isika ankehitriny mba hanana fanoloran-tena manokana an'Andriamanitra. Tsy olona mahery, na manan-talenta na manam-pahaizana no ilaina hizara ny fahamarinana ankehitriny; fa olona manana ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahiny.
Fiainam-bavaka manokana no ilain'ny mpanompo tsirairay, satria mambabo azy ny Fanahy Masina, ka lasa mahery ny fahamarinana ankehitriny satria mifanaraka amin'ny fomba fijerin'i Kristy ny eritreriny sy ny asa ataony rehetra isan'andro. Manana an'i Kristy miaraka aminy izy; lasa mahery ny fanahy tsotra indrindra rehefa miray amin' i Kristy Jesosy, ary hitoetra ny asany. Enga anie hanampy antsika ny Tompo mba hahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy hankato izany amin'ny fo, tsy voahozongozona, fa hisy fifaliana ao amin'ny Tompo. - HoM, 1 Novambra 1897.